Isikhathi okuba zithole umngane umphefumulo, futhi isikhathi futhi asayine
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Isikhathi okuba zithole umngane umphefumulo, futhi isikhathi futhi asayine
Uma zithole umngane umphefumulo nomunye bakhangwa umphefumulo, kulapho nawe wawuyozizwa nombono nomunye. Leso sikhathi umehluko phakathi abanye abantu, abanye abantu bahlangane ngaphambili kakhulu, thina abantu abahlangabezana kwamaminithi ambalwa waze waba mdala.
Ngaphezu kwalokho, uma kukhona ngisho nalapho umuntu uyazi umuzwa ukuthi soul mate, ngoba ngezinye izikhathi akuyona, eqinisweni, asikho ngaphansi icala lokuthi waphawula wahlangana ke.
Lokho kusho, kukhona into efana nesikhathi senzakalo cishe mate umphefumulo, kuthiwa abaningi Zashintsha zokuphila lomuntu. Abantu ngahlangana ngaleso sikhathi futhi umuntu abe ithuba ukushintsha indlela yokuphila, ingabe kungenzeka ibe umngane womshado umphefumulo.
soul mate ukuzama ukubamba uphawu ukuhlangabezana soul mate liye yabuye yathi kukhona kuwuphawu okunenjongo. Uzokwenzenjani kusukela uphawu yayo. Njengoba ngishilo esahlukweni esedlule
? iphuzu turning, kungenzeka kakhulu kuwuphawu lokuthi zithole umngane umphefumulo uma nibingelela zaguquka kakhulu ekuphileni kwami. Ngokwesibonelo, ekuhlukaniseni ukuqashwa kanye umhlalaphansi isikhathi, owayekuthanda, ezifana uma kuziwa baphile nge awazi ezweni, lapho imvelo ishintshile kuze kube manje wayevame kuyinto isikhathi salo.
baqaphe ukuhlobana kwemikhosi futhi abantu
manje akufanele baye bayinqoba le mate umphefumulo, kukhona kungenzeka ngabantu engihlangane nabo uxhumano nabantu abaseduze is umngane womshado umphefumulo. Ties nabantu, kuhloswe ukuba noma umphumela senzakalo, ezifana ungalindeli ngokwami. Ekuqaphela lokho kuxhumana, uma ukwazisa, kungase kudingeke ukuzithela ezithombeni umngane womshado umphefumulo nganoma yisiphi ithuba.
? omuhle imizwa
komsebenzi nokuphila lapho uphathwe utshaza, kahle inselele e into ngokwakho Ngisho nalapho umuzwa belilokhu ufulukuhlela ukuthi imiqulu yithuba lakho okuba zithole umngane umphefumulo. Lapho
umphefumulo ugcwele amandla, ungase ikhange eyensikazi umphefumulo ukuzizwa nombono. Imizwa futhi bezikhandla konke, lapho imizwa Kuye kwamiswa ukuthi ufuna ukushintsha bebodwa kuze kube manje, ake ukwazi sihlangana nabantu.
isikhathi ukuhlangabezana ezibalulekile into
soul mate ukuze ungalahlekelwa isikhathi ngokuvamile oyingqopha-mlando wendikimba kuqhathaniswa-okulula ukuyiqonda njengoba kuchaziwe ngenhla. Lokho, uma kungekho ukuqaphela ukuthi okhangwa mate umphefumulo, kungcono futhi ukuthi ngabe azithalalise.
Ngakho-ke, ukungezwani-antenna njalo ngifuna soul mate, ake abe ngiqaphele ebucayi ukubamba umuzwa lapho abaphikisi livele phambi kwamehlo. Futhi ngaphezu kwakho konke, kubalulekile ukuchitha nsuku banalo energy oqondile.